Real Madrid Iyo Liverpool Ayaa Rajo Ka Muujiyay Lasoo Wareegida Serge Gnabry
HomeHoryaalka SpainReal Madrid iyo Liverpool ayaa rajo ka muujiyay lasoo Wareegida Serge Gnabry
April 5, 2022 Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Bayern Munich Serge Gnabry ayaa lagu soo waramayaa inuu ka fiirsanayo inuu xagaaga ka tago Allianz Arena xilli ay xiiseynayaan kooxaha Real Madrid iyo Liverpool .
26-sano jirkaan ayaa xilli ciyaareedkan u ahaa ciyaaryahan muhiim u ah kooxda ka dhisan Bavaria, isagoo dhaliyay 14 gool, waxaana uu diiwaan geliyay 10 caawin 37 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Sida laga soo xigtay Goal , Bayern ayaa dooneysa inay qandaraaska u kordhiso Gnabry, kaasoo dhacaya June 2023.
si kastaba ha ahaatee, waxaa jira masaafo u dhaxaysa labada dhinac oo ku saabsan heshiis suurtagal ah, waxaana caalamiga ah ee Jarmalku uu ka fikirayaa tartan cusub oo meel kale ah.
Warka ayaa intaa ku daraya in Real Madrid ay heshiis la gashay wakiilada Gnabry kaas oo ku saabsan helitaanka xiddigan waxana ay si dhaw ula socdeen xiddiga garabka ka ciyaara shantii sano ee ugu dambaysay.
Saaxiibkii hore ee Gnabry David Alaba , oo haatan ganacsigiisa ka wada Los Blancos, ayaa la fahamsan yahay inuu ku riixayo kooxdiisa haatan inay la soo wareegto xiddiga reer Jarmal xagaagan.
Dhanka kale, tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa la rumeysan yahay inuu ‘aad ula dhacsan yahay’ ninka ay isku dalka yihiin, waxaana uu ciyaaryahankii hore ee Arsenal u aqoonsaday inuu yahay bedelka Mohamed Salah , kaasoo aan la hubin mustaqbalkiisa mustaqbalka fog ee Anfield.
Kooxda Serie A ka dhisan ee Juventus ayaa sidoo kale lagu tiriyaa inay xiiseyneyso Gnabry, kaasoo 11 koob kula guuleystay Bayern, oo ay ku jiraan 2019-20 Champions League iyo seddex horyaal oo Bundesliga ah.